हत्केलामा रेखा कस्तो छ ? यस्तो हुनेछ तपाईंको भाग्य
मंसिर १८, २०७६
न्यायका देवता शनिदेवको महादशा जसलाई लाग्दछ, उसले नाम सुनेर पनि निरास हुन्छन् । तर शनिदेव सधै नराम्रो गर्नुहुँदैन ।
शनिदेव जसको राम्रो हुन्छ, भविष्यमा उ देशको सबैभन्दा महत्वपूर्ण मान्छे बन्न सक्छ ।
हस्तरेखा शास्त्रका अनुसार जसको हत्केलामा शनि र शनिका साथै अन्य ग्रहको दशा हुन्छ, उसैअनुरुप हाम्रो जीवन अघि बढ्छ । केही व्यक्तिको स्वभाव देखि यसको करिअरसम्म पनि यो रेखा हेरेर पत्ता लगाउन सकिन्छ ।
यहाँ हत्केलामा हुने शनि रेखाको बारेमा बताइएको छ ।
जुन मानिसको हत्केलामा शनि पर्वत हुन्छ । त्यो मानिस अधिक धन सम्पत्तिको मालिक बन्छ । यसका साथै शनि पर्वतको साथ अन्य मंगल पर्वत भएको मानिस साहसी र सफलता हासिल गर्ने खालको हुन्छ ।
हस्तरेखा शास्त्रअनुसार यस्ता मानिसलाई कहिल्यै धनको कमी हुँदैन ।
शनिको स्थान भएको औंला लामो भएमा त्यस व्यक्ति शान्तिको प्रिय हुन्छ । उसलाई धार्मिक कार्य गरिरहन मन पर्छ भने आफ्नो करिअरप्रति धेरै नै इमान्दार हुन्छ । उसले नयाँ उचाई प्राप्त गर्छ ।
यदि कसैको हातको हत्केलामा जुन स्थानमा शनि हुन्छन्, धेरै रेखाहरू काटिएको छ या जीवन रेखा सीधा वा दोषपूर्ण छ भने शनिका दशा मानिन्छ । यस बाहेक हत्केलामा रेखाहरूको जार हुन्छ, उसलाई शनिको दशा नभएको मानिन्छ ।
शनिको साथै बृहस्पति राम्रो भएमा त्यस्तो मानिस बुद्धिमानी र स्वाभिमानी हुने मानिन्छ । उसले हर क्षेत्रमा उच्च शिक्षाका साथै प्रशासनिक क्षेत्रमा समेत राम्रो रहन्छ । उद्योगमा पनि उसले सफलता प्राप्त गर्छ ।
जस व्यक्तिको हत्केलामा शनि सिधा रहन्छ उस व्यक्तिको भाग्य राम्रो हुन्छ । त्यस्तो व्यक्ति कला क्षेत्रमा आफ्नो करिअर बनाउन सक्दछ ।
जुन मानिसको हत्केलामा शनि र सूर्यको स्थिती राम्रो हुन्छ, उसले आफ्नो जीवनमा सुख पाउँछ । यसका साथै उसको व्यक्तित्व पनि राम्रो हुन्छ । शास्त्रका अनुसार यस्ता व्यक्ति धेरै नामी तथा दामी हुन्छ ।
हाम्रो जीवनशैलीमा तुलसीको महत्त्व कति ?
जब भगवान कृष्णले बाँसुरीलाई तोडेर झाँडीमा फालिदि...
उत्तर प्रदेशमा संसारकै सबभन्दा अग्लो श्रीराम मूर्ति ब...
मारिन लागेका अर्जुनका नातिलाई श्रीकृष्णले जीवित बन...
कृषि प्रधान देश : अपहेलित कृषक, उपेक्षामा सिँचाइ !
छाउगोठको आगोमा खसेकी महिलाको आधा शरीर जलेर घाइते
पीएसजी जाने सोच बनाउँदै रोनाल्डो, किन्ला क्लबले ?
गोंगबु हत्या प्रकरण : यस्ता छन् प्रहरीले पत्ता लगाएका १६ तथ्य र ८ प्रमाण
कोरोना महामारी र राजनीतिक वातावरणका कारण अमेरिकीहरू धमाधम नागरिकता त्याग्दै
बेलारुसमा सरकारविरुद्ध जनताको आक्रोश, प्रदर्शनका क्रममा १ जनाको मृत्यु
गोंगबु हत्याकाण्डको पर्दा खुल्यो : अभियुक्त कल्पनाले प्रहरीलाई दिइन् यस्तो बयान
लेबननमा पूरै सरकारले राजीनामा दिएपछि अन्योलको स्थिति
कोरोनाको बहाना : कामचोर ठेकेदारलाई ६ महिना म्याद थप इनाम !